वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा आइरहेको छ । अहिलेसम्मको नतिजा हेर्दा यो चुनावको सन्देश– पहिलो त नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू गठबन्धनको सहकार्यलाई विस्तार रूपले स्वीकार गर्दैछन् भन्ने छ ।
दोस्रो, माओवादी त्यति कमजोर थिएन, एउटा विद्रोही जसलाई धेरै टाढा राख्नुहुँदैन भन्ने छ । धेरैजसो उसैका एजेण्डाका आधारमा हामीले संविधान बनाएका हौं । तेस्रो कुरा, नेपाली कांग्रेस धेरै कमजोर भइसकेको थियो, भलै गठबन्धनबारे कांग्रेसभित्र आफ्ना तर्कवितर्क थिए, आशंका थिए । गठबन्धनले गर्दा धेरै ठूलो उपलब्धि माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई भएको छ । कांग्रेसलाई पनि फाइदा भएको छ ।
चौथो कुरा, एमालेको पालामा आफ्नो दुईतिहाइ सरकार चलाउन नसकेको अवस्था, केन्द्र र प्रदेशका सरकार चलाउन नसकेर आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको कारणले काम गर्न सकेनौ भन्ने सन्देश पनि जनताले दिएका छन् । देशमा सुशासन कायम गर्दै गरीबीको अन्त्य गर भन्ने सन्देश पनि चुनावले दिएको छ । यी कुराहरू मतदानमार्फत नेपाली जनताले फैसला गरेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
यसकारण कांग्रेसलाई रुचाए
गत स्थानीय चुनाव, संघ र प्रदेशमा जनताले एमाले रोजेका थिए, तर उसको असफलतापछि कांग्रेस रोज्नुबाहेक जनतासित विकल्प थिएन । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार चल्न सकेन । ओली सरकारमाथि स्वयं सरकारको नेतृत्वकर्ता दलबाट विभिन्न प्रश्न उठे । भ्रष्टाचारका कुरा उठे । दोस्रो, ओली कामभन्दा पनि अरूलाई गाली गलौजमा उत्रिएको कुरा जनताले मन पराएनन् ।
तेस्रो, घरभित्रको द्वन्द्वबाट पार्टी छियाछिया भयो । जनताका समस्या उस्तै छन् । जनताका सामान्यभन्दा सामान्य समस्या समाधान भएका छैनन्, तर देशको नेतृत्व गरेको दलका नेताले ठूला कुरा गर्दा जनता र नेताको बीचमा तालमेल भएन । त्यो असन्तुष्टि मतदानमार्फत जनताले प्रकट गरे ।
२३ सीट जितेको कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने परिस्थिति केपी ओलीकै कारण बन्यो । कांग्रेस कसैलाई गाली नगर्ने, सबैलाई मिलाएर जान सक्ने र खुरुखुरु काम गर्ने रेसिस्ट पावर भएको पार्टी भएकाले जनताले कांग्रेसलाई नै उचित विकल्प देखे । जनताको यो विश्वास जित्नु अब कांग्रेसको दायित्व हुन पुगेको छ ।
ओलीप्रतिको आकर्षण घट्यो
पछिल्लो केही समययता सामाजिक सञ्जाल हेर्दा बिहानदेखि बेलुकासम्म केपी ओलीले अरूलाई गाली गरेको बाहेक केही देखेनौं । भाषणमा कुनै रचनात्मक कुरा छैन । मैले के गर्छु, पार्टीलाई कसरी लैजान्छु, स्थानीय तह कस्तो बनाउँछु भन्दा पनि गालीगलौजमा उत्रिनुभयो । हेर्नुस् त, उहाँले कांग्रेसलाई लगाएको आरोप । उहाँले अन्य दलका नेतालाई यति गाली गर्नुभयो कि मानिसले त्यो सहन सकेनन् ।
आधुनिक र सभ्य विश्वमा अहिले गालीभन्दा पनि आफ्नो एजेन्डाका आधारमा भोट पाएको देखिरहेका छौं । देशलाई कसरी अगाडि बढाउन चाहन्छ, स्थानीय तहलाई कसरी विकास गर्छ भन्ने कुरा जनताले हेरेका हुन्छन् । खेती किसानी गर्ने जनताले के खोजिरहेका छन् ? गाउँका जनताले स्कूल कस्तो खोजिरहेका छन्, कलेज कस्तो खोजिरहेका छन्, गाउँको समस्या के हो ? यो कुरालाई भन्दा पनि ओलीले जनताको जीवनमा प्रभाव नपार्ने ठूला कुरा मात्र गर्नुभयो । ओली गालीगलौजमा सीमित रहेका कारण जनताले एमालेलाई मन पराएनन्, पत्याएनन् ।
बन्न सक्छ फेरि वामपन्थी गठबन्धन ?
चुनावमा एमालेलाई लागेको धक्कापछि फेरि वामपन्थी गठबन्धनको हल्ला चलेको छ, तर म त्यो सम्भावना देख्दिनँ । यो चुनावमा भोट गर्दा शीर्ष नेताहरूले गठबन्धनलाई २० वर्षसम्म चलाउने भनेका थियौं, त्यति लामो नगए पनि आगामी संसदीय चुनावसम्म यो सरकार चल्छ ।
गठबन्धन पछिसम्म जान्छ भनेर प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुरजी, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डजी, माधवजीले, झलनाथजीले भनिरहनुभएको छ । हुन त नेपालको राजनीति सत्ता र स्वार्थकेन्द्रित भइरहेको छ, तथापि उहाँहरूले स्थानीय तहको चुनावमा भोट माग्दै गर्दा जे कुरा लिएर जानुभएको छ, त्यसको आधारमा यो गठबन्धन प्रतिनिधि सभा चुनावसम्म जान्छ भन्ने नै लाग्छ ।
संसद् विघटन र संविधान कुल्चिएको अवस्थामा बनेको यो गठबन्धनको धरातल त्यति कमजोर छैन । गठबन्धन बनाउँदादेखि अस्ति चुनावअघि गरेको वाचाअनुसार पनि नेताहरू यसप्रति इमान्दार देखिएका छन् । विगतमा नेताहरूले इमान्दारी कुरा गरेका छैनन्, जनतालाई विश्वासघात गरेका छन्, यो नगरुन् भन्ने उनीहरूको चाहना छ । ठूला कुरा गर्नुभन्दा पनि जनताका समस्या समाधान गर्ने एजेन्डा लिएर चुनावमा जानुपर्छ ।
काठमाडौंको अभिमत– दलप्रतिको आक्रोश
काठमाडौंमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहले मेयरमा पाइरहेको लोकप्रिय मतलाई हामीले दुई तीन तरिकाले हेर्नुपर्छ । काठमाडौंको कुरा हेरौं, अहिलेको लिडरसिपले युवाहरूको आवश्यकता र चाहना बुझ्न नसकेका कारण उनले भोट पाए । अहिले ग्लोबल भिलेजको कुरा आइरहेको समयमा जनताले के चाहिरहेका छन् ? त्यो कुरा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले बुझेनन् ।
अहिले जसरी भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले गर्दा राजनीति दुर्गन्धित भइरहेको छ । अहिलेको स्थानीय तहको चुनावले त्यसलाई हटाउन सकेन भने स्वतन्त्रले चुनाव जित्ने प्रवृत्ति अझै बढेर पार्टीहरू कमजोर हुन्छन् । राजनीतिक दलहरूप्रतिको असन्तुष्टिले नेपालमा भारतको केजरिवाल जस्तो वैकल्पिक राजनीतिक दल स्थापना हुनसक्छ । पार्टीहरूले आफूभित्र व्यवस्थापन गर्न सकेनन् र पारदर्शी बनेनन् भने बालेन जस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सकिन्न ।
(कांग्रेस नेता भण्डारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित) ।